Maritime Ebooks and Software Collections ~ MSU Portal
11/20/2012 03:24:00 PM winsu pyae3comments
1. ဒါလေးကိုကြိုက်ကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ CES 4.1 ပါ။ Word file မှာ ကီး ပါပါတယ်။ ရုရှားစာလုံးတွေကိုနားလည်ချင်ရင်တော့ Ace Translator, Babylone တို့ လိုမျိုး ဘာသာတော်တော် များများကနေ English ကိုဘာသာပြန်ပေးတဲ့ Software တွေကိုသုံးပါလို့ (မသိသေးသူများအတွက် သာလေကြောရှည်မိပါသည်)
LINK: Click here to download the Software !
2. SHIPBOARD AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM DISPLAYS ကို Download လုပ်ရခက်နေရင် ဒီကနေယူလိုက်ပါ -
LINK: Click here to download the book!
3. IMO Ship's Routeing 8th Edition ပါ -
Link: Click here to Download the book !!!
4. RADAR SIMULATOR Software လေးပါ။ Windows XP နဲ့ဘဲရပါလိမ့်မယ်။
LINK: Click here to download Software!
5. Maritime Progress Book ပါ၊( IMO symbol , safety poster ...etc)
LINK: Click here to Download !!!
6. ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက Internet မှာ Surfing လုပ်ရင်းနဲ့ သူ့နိုင်ငံ သူ့လူမျိုး သဘောင်္သားတွေ တိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ထားကြတဲ့ forum တွေ ကိုစမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ရောက်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီတုန်းက အော်... ငါတို့ဆီမှာလည်း ဒီလိုအကျိုးပြု forum တွေရှိရင်ကောင်းမှာဘဲလို့တွေးမိခဲ့ပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့လဲ စပီး အကောင်အထည် မဖေါ်တတ်လေတော့ အတွေးမှာဘဲေ၀၀ါးပျောက်ကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။ ခုတော့ Myanmar Seamen Union လိုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတော့ အတော့်ကို ၀မ်းသာမိခဲ့ပါတယ်။ သိလို့ဒီကိုရောက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ Internet မှာ စမ်းတ၀ါးဝါး လမ်းသလားရင်း တွေ့လိုက်ရတာပါ။
ဘာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မသိတော့ SHOUT BOX ကနေ ကျွန်တော်သိထားတဲ့ Link တွေကို တင်တာပေါ့။
အရမ်းကို မြင်ချင်တဲ့ အရာကိုမြင်လိုက်ရတာကိုး၊ လုပ်မိတော့တာပေါ့၊ ဒီမှာဘဲ အီးမေးနဲ့ ပေးပို့လို့ရတယ် ဆိုလို့လဲ ပို့တာပေါ့၊ အ၇မ်းကိုပို့ချင်နေတာလေ၊ ဖိုးပို့ချင်ဆိုပါတော့၊ ဆရာ Hlaing Pyae ကိုအရမ်းကျေးဇူး တင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်ကို Blogger လုပ်တတ်သွားအောင် Invite လုပ်ပေးတယ်လေ၊ Scribe.com မှာ ဆရာစုဆောင်းထားတာတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ download လုပ်ခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ။ ကျေးဇူးကျိတ်တင်နေခဲ့တာပါ။ ခုတော့အွန်လိုင်းကနေကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောခွင့်ရလိုက်ပြီလေ။ အဲဒီမှာလည်း bear7 ဆိုတဲ့nick name နဲ့ကျွန်တော်upload လုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ လူတွင်ကျယ် ကိုစာတတ်ကြီး လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အချိန်ကုန် ငွေကုန် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှန်းမသိထိခိုက် ခံပီး သဲကြီး မဲကြီး မိမိအတွက် Essential, Non-essential ခွဲခြားမနေဘဲ Surfing လုပ်ရင်း တွေ့ထားသမျှတွေ ကို SHARE ပေးတာပါ ဆိုတာကိုပြောပါရစေ၊ ဘယ်အရာမဆို မသိရင်ခက်တယ်မဟုတ်ပါလား၊ သိသွားရင်တော့ easy going ပေါ့၊ အရာအားလုံးကိုတော့ ပြီးပြည့်စုံအောင် မသိနိုင်ပေမဲ့လည်း သိသမျှကို Share ပေးတာပါ။ ဒီလိုသူသိ ကိုယ်သိတွေကို share ကျရင် ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိုက်သလဲဗျား။ သိထားတာတွေထပ်တူကျနေရင်လဲ ဘာဖြစ်လဲ၊ ကိုယ့်အတွက်မလိုပေမဲ့လည်း လိုတဲ့သူတော့ ရှိအုံးမယ် မဟုတ်လားနော်။
" MYANMAR SEAMEN UNION " အဓွန့်ရှည်တည့်တံ့ခိုင်မြဲပါစေ လို့လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရင်ထဲကနေ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒါကတော့ Stability and Trim for the ship's officer ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါ-
7. ဒါလေးကတော့ CHART WORK ပါ-
Posted in: download links,guide,knowledge,maritime books,softwares
November 20, 2012 at 8:17 PM Reply
Stability and Trim for the ship's officerကိုဒေါင်းသွားပါ
သည်။winsu pyae နှင့်msu အဖွဲ့သားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Sitt Moe Oo says:
May 17, 2013 at 6:52 PM Reply